ရှားပါးမြေများ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ လက္ခဏာများ၊ အသုံးပြုမှုနှင့် အရေးပါမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
Periodic Table ၏ဒြပ်စင်များကိုကြည့်သောအခါ၊ အများစုမှာ ကျန်ရှိနေကြပြီး ဟုခေါ်ကြသည်။ ရှားပါးဒြပ်စင်များ. ၎င်းသည် အလှည့်ကျဇယား၏အောက်ခြေတွင်ရှိပြီး ၎င်းတို့မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည် ကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့် တူညီမည်မဟုတ်ပေ။ ဤရှားပါးမြေကြီးများကြောင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစသည်ဖြင့် နည်းပညာမြင့် စက်ပစ္စည်းအများစုကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည် ။
ဤဆောင်းပါးတွင် ရှားပါးမြေများအကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ လက္ခဏာများနှင့် အရေးပါမှုတို့အကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
4 Lanthanides နှင့်၎င်းတို့၏အရေးပါမှု
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဤသတ္တုများသည် ၎င်းတို့၏အမည်များကဲ့သို့ ရှားပါးသည်မဟုတ်သော်လည်း တူးဖော်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် သတ္တုဓာတ်များတွင် စုပုံလေ့မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရှားပါးသတ္တုကို နည်းပညာမြင့်အသုံးချမှုများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပါက၊ ရှားပါးမြေများကို အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေသည့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
၎င်းသည် ဓာတုဒြပ်စင်များ အတွဲလိုက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာတွင် တွေ့ရှိရပြီး ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိ နည်းပညာများစွာအတွက် အရေးကြီးပါသည်။. ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှားပါးမြေများကို လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်များ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် ကွန်ရက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်လျော့ပါးသက်သာစေရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ အဆင့်မြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြားအရာများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ သံလိုက်၊ တောက်ပမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အလွန်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းတို့သည် ထူးခြားသော အရည်အချင်းများဖြစ်ပြီး ဤအရာများအားလုံးသည် နည်းပညာများစွာကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း သက်သာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်။ ဒီလမ်း, ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုထိရောက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ မြန်နှုန်း၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုတို့ဖြင့် လက်ရှိနည်းပညာကို ရောက်ရှိလာပါသည်။ ရှားပါးမြေကြီးနည်းပညာပါ၀င်သော ထုတ်ကုန်များသည် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အသက်များကိုပင် ကယ်တင်နိုင်ချိန်တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးသည်။
ရှားပါးမြေများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ကြည့်လိုက်ရအောင်၊ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေအပေါ်ယံယံလွှာတွင် ၎င်းတို့၏ ပေါများကြွယ်ဝမှုအရ အထူးရှားပါးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများသည် ၎င်း၏ အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အလှည့်ကျဇယားရှိ အခြားဒြပ်စင်များနှင့် ကွဲပြားစေသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဖွဲ့စည်းပုံများရှိသည်။ ရှားပါးမြေအားလုံးသည် အရေးကြီးသော ဂုဏ်သတ္တိများ မျှဝေကြသော်လည်း အခြားအရာများသည် သီးခြားဒြပ်စင်များအတွက် ပိုမိုတိကျပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သတ္တုဓာတ်များနှင့် တွဲ၍ တွေ့ရှိရသည်။ ကျောက်တုံးများသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တူညီမှုများကြောင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲရန်ခက်ခဲသည်။. ဒါကို ဓာတုပေါင်းစပ်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါး မြေကြီးများသည် လက်တွေ့အသုံးချမှု မြောက်မြားစွာ ရရှိထားသည့် ၎င်းတို့၏ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိကြောင့် အလွန်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သီးခြားဒြပ်စင်များနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ခွဲထုတ်နိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှုကို ကျော်လွှားရမည်ဖြစ်သည်။
အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်၊ ၎င်းတို့၏ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကို အခြေခံ၍ ရှားပါးမြေအမျိုးအစားများစွာ ရှိသေးသည်။ အရွယ်အစားသည်လည်း ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်တမ် အရေအတွက် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ Lanthanides ၏ အက်တမ် အရွယ်အစား လျော့နည်းသွားသည်။ ယင်းကြောင့် ပေါ့ပါးသော ရှားပါးမြေများကို ပိုမိုလေးလံသော ရှားပါးမြေများနှင့် ကွဲကွာစေသည်။ နှစ်မျိုးလုံးကို မတူညီသောသတ္တုဓာတ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် lutetium ကိုရည်ညွှန်းပါက၊ ရရှိနိုင်သောဆိုဒ်များအတော်လေးသေးငယ်သောတွင်းထွက်သတ္တုများတွင်အခြားဒြပ်စင်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာအစားထိုးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရပါသည်။ ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်ပေါင်းများသည် များသောအားဖြင့် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ အောက်ဆိုဒ်များထဲတွင် အတည်ငြိမ်ဆုံးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ Lanthanide အများစုတွင် trivalent state ရှိသည်။
ဤဒြပ်စင်များကို ပိုင်းခြားထားသည့် ကွဲပြားသော အမျိုးအစားများကို ကြည့်ကြပါစို့။ ပထမအချက်မှာ အလင်းရှားပါးသောမြေများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော lanthanoids များဖြစ်သည်။ သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
စာရင်းတစ်ခုလုံးမှာ တစ်ခုတည်းသော အရာပါ။ ပရိုမီသီယမ် (Promethium) ကို သဘာဝအတိုင်း မတွေ့ပါ။ ပရိုမီသီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်အားလုံးသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောကြောင့် ၎င်းကို နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင်သာ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သဘာဝအတိုင်း ရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူး။
သေချာပါတယ်၊ သင်သိချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့ ရာသီခွင်ဇယားကို လေ့လာတဲ့အခါ Lanthanides အကြောင်း သင်သိပါတယ်။ ဤအရာများသည် ကမ္ဘာမြေအပေါ်ယံလွှာတွင် အလွန်တွေ့ရလေ့ရှိသော ဒြပ်စင်များဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ထုတ်ယူရခက်ပါသည်။ ထုတ်ယူရန်ခက်ခဲရုံသာမက ပမာဏများစွာဖြင့်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် တောက်ပြောင်ပြီး များသောအားဖြင့် ငွေရောင်ရှိသည်။. အောက်ဆီဂျင်နှင့် ထိတွေ့ပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့တွင် ငွေရောင်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုမှုဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပေါက်ကွဲမတတ်သော်လည်း အခြားဒြပ်စင်များ၏ ညစ်ညမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
lanthanides အားလုံးသည် တူညီသောနှုန်းဖြင့် ညှိုးနွမ်းသည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ lutetium နှင့် gadolinium သည် စွန်းထင်းခြင်းမရှိဘဲ လေထဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခြားလန်သနမ်၊ နီအိုဒီယမ်နှင့် ယူရိုပီယမ်ကဲ့သို့သော အခြားလန်သနိုက်များရှိသည်။ ဓာတ်ပြုမှုအလွန်များပြီး မှိုတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဓာတ်သတ္တုဆီတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
Lanthanide စီးရီး၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် အလွန်ချောမွေ့သော အသွင်အပြင်ရှိသည်။ အများစုကို ဓားဖြင့် အလွယ်တကူ ဖြတ်နိုင်ပြီး ကုသမှုအတွက် လေးလံသော ကိရိယာများ မလိုအပ်ပါ။ ရှားပါးမြေဟု ယူဆရသည့် ဒြပ်စင်များကို ရှာဖွေရန် ခက်ခဲသောကြောင့် မစဉ်းစားပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် လုံလောက်သောပမာဏဖြင့် သန့်စင်သောပုံစံဖြင့် ထုတ်ယူရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရှားပါးမြေဟုသာ သတ်မှတ်ကြသည်။ သူတို့က အသုံးမကျဘူးဆိုရင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော ပမာဏကို မရနိုင်ပါ။
ဤမြေများသည် ဈေးကွက်တွင် ကြီးစိုးသောထုတ်ကုန်များဖြစ်လာရန် အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရှားပါးမြေရိုင်းများ အများဆုံးအရန်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပြီး ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာနှင့် ဆက်စပ်မှု ပေါများသော်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော ပြင်းအား သို့မဟုတ် အခြားသတ္တုအများစုထက် နည်းပါးသည်။
၎င်းသည် သင်၏ထုတ်ယူမှုကို ပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှားပါးမြေဝယ်လိုအားကြောင့် မြင့်တက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ မော်တော်ကားများ၊ လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသော အလင်းရောင်နှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပြောင်းစက်များတွင် အသုံးပြုရန်။
၎င်းတို့သည် ထူးခြားပြီး အစားထိုး၍မရသော အဓိကဒြပ်စင်များဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အစိမ်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်း (လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဟိုက်ဘရစ်များ၊ တာဘိုင်စသည်ဖြင့်) တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြသော ကွန်ပျူတာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားများ၊ လေဆာများကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်မှု၏ အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ၊ ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းရဲ့ 90% ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဤဒြပ်စင်များသည် ပထဝီနိုင်ငံရေး ပတ်၀န်းကျင်ကို အထူးထိခိုက်လွယ်စေပြီး ဥရောပစီးပွားရေးအတွက် အရေးကြီးသောပစ္စည်းများကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ရှားရှားပါးပါးသတ္တ ၀ ါတွေအကြောင်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » ရှားပါးကမ္ဘာ